Ngubani owabona ibali lam kwi-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Julayi 11, 2019 0 IiCententarios 2287
I-Instagram yenye yezona zintanethi zontlalontle ezaziwayo ngeli xesha, ubukhulu bayo buhamba ngaphaya koko sicinga, kunye nenani labasebenzisi kwihlabathi liphela. Kwaye ngenxa yesi sizathu, kukuba kunokwenzeka Umbuzo wokuba ngubani owabona ibali lam kwi-Instagram liza. Ngale ndlela kwaye njengaye nabani na unokwenzeka ukuba azi ukuba kukho izigidi zabantu abasemva kweselfowuni, ithebhulethi okanye ikhompyuter ihlolisisa eli qonga.
Oku kwamathandabuzo yinto eqhelekileyo kakhulu njengoko zinjalo nazo ukwazi ukuba ngubani onokubona iprofayile yakho, iifoto zakho, iividiyo kunye nomxholo oyifaka kwi-Instagram. Kungenxa yoko le nto siza kugxila kukukufundisa amaqhinga kwaye sichaze ezinye zeendaba ongazaziyo, ngezantsi.
Ungazi njani ukuba ngubani owabona ibali lam kwi-Instagram?
Kukho iindlela ezahlukeneyo ukwazi ukuba ngubani onokubona amabali akho kwi-Instagram, ekwaxhomekeke kwisixhobo apho usebenzisa khona isicelo. Kodwa ngokubanzi, singakuxelela loo nto Amabali awaboniswa kubo bonke abalandeli onabo kwiqonga, kodwa kulinganiselwe kuphela kubantu oqhele ukunxibelelana nabo okanye abo balandela abantu abambalwa. Ke ngoko, ayiyi kuboniswa kubo bonke.
Ngale ndlela, siya kukubonisa kule migca ilandelayo ukuba wazi njani ukuba ngubani owabona ibali lam le-Instagram olipapashileyo, ngaphandle kwenani labalandeli onabo.
Indlela yokuqala yokwazi ukuba ngubani obone ibali lam le-Instagram
Ukuqala kufuneka uvule iakhawunti yakho ye-Instagram kwisicelo. Unako kamva shicilela umxholo owufunayo kwi icon yekhamera, ebekwe kwicala lasekhohlo lesikrini. Emva koko, cinezela umfanekiso wakho weprofayile, obonakala okokuqala kwicandelo lamabali apapashiweyo.
Ke ibali osandula ukulipapasha liya kuvula, kulapho unokukhetha khona ngasezantsi ekhohlo Ifoto yabo basebenzisi sele beyibalile ibali lakho. Kodwa kwimeko yokuba akukho mntu ubonakalayo kuwe, kungenxa yokuba akukho msebenzisi ukhe wabona umxholo oyilayishile, ngenxa yoko kuya kufuneka ulinde ixesha elincinci.
Nje ukuba ithebhu ivulwe ungabona ukuba ngabaphi abasebenzisi ababone ibali lakho, nokuba kuninzi kwibar yasekhohlo ephezulu, kanye emazantsi apho amagama abasebenzisi abayibonileyo avela ngqo.
Njengoko ubona, yinkqubo elula kakhulu kwaye elula ongayisebenzisa xa ufuna ukwazi ukuba ngawuphi amehlo abeke ukukhanya kwabo kumabali owafake kule nethiwekhi yentlalo. Kodwa kuya kufuneka ukhumbule ukuba kukho abasebenzisi abangakulandeli Banokuwubona umxholo wakho ukuba usebenzisa i-akhawunti kawonke wonke.
Ngoku siza kukubonisa ukhetho lwesibini onokuthi ulufake isicelo kwakhona.
Indlela yesibini yokwazi ukuba ngubani owabona ibali lam kwi-Instagram
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuvula iakhawunti yakho ye-Instagram kwisicelo kwaye ulayishe ibali ukuba awukakwenzi oko, emva koko kufuneka uvule umxholo osanda kuwupapasha, ongayenza ngokukhetha umfanekiso wakho weprofayili kwicandelo okanye icandelo lamabali.
Enye indlela yokwenza oku kukufikelela ngokuthe ngqo kwiprofayile yakho, ucofa umfanekiso wakho kumazantsi asekunene kwaye uphinde uwukhethe, uwukhethe kwiprofayile yakho. Ngale ndlela, ibali olishicilele liza kuvula, okwangoku kufuneka swayipha isikrini ukusuka ezantsi ukuya phezulu kwaye ke ithebhu entsha iya kuvulwa. Ngenxa yoko, uya kuboniswa uluhlu lwabantu abanabo bonke abasebenzisi ababukele amabali akho.
Njengale yangaphambili, le fomu kulula kakhulu ukuyenza kwaye kuyo ungabubona ubume bonke abo bangene kumabali akho. Ngale ndlela sikubonisa ngezantsi enye indlela yokwenza inkqubo.
Indlela yesithathu yokwazi ukuba ngubani owabona amabali am kwi-Instagram
Ukuqala, ngendlela oyenze ngayo kunye neyangaphambili, kufuneka uvule iphepha le-Instagram, umahluko ukuba eli xesha liya kuba livela kwikhompyuter yakho. Okwesibini, cinezela umfanekiso weprofayile kwicandelo lembali elifunyenwe njengekhasethi kwicandelo leendaba. Emva kwexesha, khetha ifoto yakho kwakhona kwaye amabali owapapashileyo aya kuvulwa ngaphambi kweli langoku.
Nje ukuba uyenze, ungaqaphela ukuba ngezantsi ngasekhohlo uyakufumana Iifoto zephrofayile zabantu abaye balijonga ibali lakho. Ukulandelwa koku, kuya kufuneka ucinezele ukuya kwi-pop-up tab ebizwa ngokuba "ngababukeli" kulapho bonke abasebenzisi abawubonileyo umxholo opapasha kuwo amabali.
Le nkqubo ilula kakhulu kwaye iyasebenza, kwaye kuwo ungawufezekisa umsebenzi wakho. Kodwa kusekho owokugqibela odibana nabo babona amabali ethu.
Ukuqala kufuneka uvule iakhawunti yakho ye-Instagram ngegama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, njengoko uhlala usenza mihla le. Emva kwexesha Uya kuba sele usekho kwinethiwekhi yezoluntu kwaye uyawubona umsebenzi owenzekayo, kwikona ephezulu ngasekhohlo kukho isangqa esinomfanekiso weprofayile yakho othi "Ibali lakho" kwaye kufuneka ucofe.
Into yokuqala eza kuvela yimbali oyilayisheyo, kwaye ke ubeke umnwe wakho kuyo kwaye uyilayishe phezulu. Kodwa kuya kufuneka uqaphele ukuba xa uvula ibali liza kusebenza ngemizuzwana kunye nokuhamba kokunyuka Kuya kufuneka ngokukhawuleza ukuze umxholo ofuna ukuwuphonononga ungavali. Kwaye xa uyenzile, uya kuboniswa bonke abasebenzisi abakubonileyo ukupapashwa.
Zonke ezi nkqubo sikucacisele zona nabani na angayenza ngaphandle kobunzima Ngale ndlela unokonwaba ekuhleni ngamabali uyazi ukuba ngubani owababonileyo.
Kodwa ukuba akwanelanga ukuba uyazi ukuba ngubani obone ibali lakho kodwa ufuna nokulawula kwaye ukhethe ukuba ngubani onokuwabona okanye angakuboni, siza kukubonisa kule migca ilandelayo indlela yokuphendula umbono wakho.
Uyifihla njani ibali lam le-Instagram?
Zininzi iinkqubo zobuqhetseba kunye namaqhinga kwi-intanethi athi angakubonisa ukuba ngubani onokuwabona amabali akho nokuba uyawalandelela, kodwa ayiyonyani, Zimbini kuphela iindlela zokufihla amabali abantu abavunyelwe yi-Instagram.
Fihla imbali ngokubanzi
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuya kwiprofayile yakho kwaye uchukumise imigca emithathu ethe tye ebekwe phezulu ekunene. Emva koko chukumisa useto kwaye ukhethe "Ubumfihlo bamabali", emva koko kufuneka ucinezele inani labantu abalandelayo "Fihla imbali ku ..." Xa sele ugqibile, khetha abantu ofuna ukuyifihla ibali kwaye ulichukumise, eli nyathelo lingaphindwaphindwa ngokuthi iphinde inkqubo.
Fihla imbali ngendlela ethile
Ngendlela efanayo unokukhetha abantu ofuna ukufihla ibali ngelixa ucebisa ukuba ngubani owayibonileyo. Ukuba usebenzisa inkqubo yokusebenza iOS kufuneka ucinezele la manqaku mabini abekwe ngokuthe tyaba, kwimeko ye Android amanqaku athe nkqo, emva kokucinezela ukhetho, ngasekunene kwegama ungakhetha "fihla imbali kwi ..."
Kwelinye icala, ukuba ibali elikwiphepha le-hashtag okanye indawo, unokuyibona ngasentla kuluhlu lwabantu ababone ibali lakho. Ukufihla ibali lakho kwelo phepha, unokuchukumisa u "x" ebekwe ngasekunene kwephepha.
Kuya kufuneka uthathe ingqalelo yokuba ukufihla ibali lomntu omnye okanye abambalwa Ayithethi ukuba ibhlokile, ke aba basebenzisi baya kuqhubeka nokufikelela kwiprofayile yakho ye-Instagram kunye nakwizithuba ozihambisa ngokwesiqhelo.
Useto olunika iakhawunti yakho ichaphazela nokuba ngubani onokuwabona amabali akho, kuba ukuba uneakhawunti yabucala, kuphela abo bantu ubavumileyo njengoko abalandeli bakho unokubabona. Ngelixa i-akhawunti isesidlangalaleni, bobabini abalandeli bakho kunye nabasebenzisi abangakulandeliyo unokubabona kodwa banokubona iprofayile yakho, ukongeza kuye nabani na owenza iDiret nawe.
Ngaba luncedo ukwazi ukuba ngubani owabona ibali lam kwi-Instagram?
Impendulo yalo mbuzo ixhomekeke indlela enkulu yesizathu sokuba ufuna ukufihla ibali lakho, Ndiyasazi isizathu sokuba ufuna ukumangaza umntu kwaye ungafuni ukuba awubone umxholo oyilayishayo, okanye ngenxa yokuba kukho umntu osebenzisa iiposti zakho ukukubeka kwelinye iphepha. Ukongeza kwiimeko eziqhelekileyo zokuhlukunyezwa okanye zokugxekwa ezifunyanwa ngabantu abathile.
Kuzo naziphi na iimeko ezingentla, ukhetho lokufihla ibali lakho kunokuba sisisombululo kwiingxaki zakho, kuba ziyakuvumela lawula imbonakalo kuyo yonke into oyifakayo. Ke, akusayi kuba malunga nokuba ngubani onokuthi kodwa ngubani na ovumela ukuba yinxalenye yento owabelana ngayo kwi-Instagram.
1 Ungazi njani ukuba ngubani owabona ibali lam kwi-Instagram?
1.1 Indlela yokuqala yokwazi ukuba ngubani obone ibali lam le-Instagram
1.2 Indlela yesibini yokwazi ukuba ngubani owabona ibali lam kwi-Instagram
1.3 Indlela yesithathu yokwazi ukuba ngubani owabona amabali am kwi-Instagram
1.4 Ifom yesine
2 Uyifihla njani ibali lam le-Instagram?
2.1 Fihla imbali ngokubanzi
2.2 Fihla imbali ngendlela ethile
3 Ngaba luncedo ukwazi ukuba ngubani owabona ibali lam kwi-Instagram?
Xa i-Instagram isusa ukuthanda